किनकि हामी नर्स हौं ...
जेठ २६, २०७३ बिहिवार ०१:०५:०० प्रकाशित
‘नर्सहरू छुच्चा हुन्छन् । केही कुरा सोध्यो भने उल्टै गाली गर्छन् । धेरै रिसाउँछन् ।’ यस्ता कुरा हामीले दिनहुँ सुनिरहेका हुन्छौं । के यी कुरामा सत्यता छ ? वा केहीले साँच्चि नै यस्तै व्यवहार गरेकाले सम्पूर्ण पेसाकर्मीलाई नै यस्तो भनिरहेका छन् स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरू ?
घरमा एक सदस्य बिरामी हुँदा सम्पूर्ण परिवारमै चिन्ता अनि चासोको विषय बन्छ । रोग निको पार्न पैसा तिरेर सेवा लिन आएका बिरामी र तिनका आफन्त अस्पतालको नयाँ वातावरण र उपचार पद्धतिलगायतले निकै तनावमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा अस्पतालका सम्पूर्ण कर्मचारीबाट राम्रो सेवा, मिठो बोली र नरम व्यवहारको आशा राख्नु अस्वाभाविक होइन । हामीलाई आफ्ना पेसागत समस्या अनि कामको चाप त छँदैछ तर पनि आफूलाई उनीहरूको ठाउँमा राखेर हेर्न सक्यौं भने सायद हामीलाई अनि हाम्रा बोली र व्यवहारलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो कि ?
हामी केहीमा रहेका यस्ता बानीले नर्सिङ् पेसाप्रति नकारात्मक भावना सृजना गरिरहेको छ ।
हामीले आफ्नो उमेरले देख्नेभन्दा बढी जीवन देखेका हुन्छौं । मानिस जन्मिएको देखेका छौं, मानिसले रोगसंग लडेको देखेका छौं, हाँस्दाहाँस्दै मान्छे मरेको देखेका छौं । अनि मृत्यु जितेर अन्तिम क्षणमा पुगेको मान्छे बाँचेको देखेका छौं । हामी त झन् व्यवहारिक र परिपक्व हुनुपर्ने होइन र ?
निकै संघर्षपछि यो पेसा आज यो स्थानमा आइपुगेको छ । सर्बसाधारणले नर्सिङको महत्व बुझ्न थालेका छन् अनि समस्या पनि । त्यसैले हामी हाम्रो व्यवहारमा नचुकौं, राम्रो बनौं । हामी हाम्रो पेसालाई अघि बढाउने प्रयासरत छौं । चौतर्फी हाम्रा बारेमा आवाजहरू उठिरहेका छन् । कतै हाम्रै बोलीबचनले हाम्रो पेसामा असर त परिरहेको छैन ? डाक्टर हुन् या नर्स, जोसुकैको बोलीवचनमा सुधार जरुरी छ । बिरामीसंग धेरै समय नर्स नै हुने गर्छन् । त्यसैले केहीको व्यवहारका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै असर नपारौं । आफ्ना दुःख भुलेर बिरामीलाई सन्तानलाई जसरी हेरचाह गर्न सक्छौं किनकि हामी नर्स हौं । कहिलेकाही बिरामी र उनीहरूका आफन्तले केही सोधे भने मोबाइल र गफमा व्यस्त भैदिने, झर्किने र रिसाउने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण नर्सिङ पेसाकर्मीप्रति नकारात्मक असर परेको त होइन ?
हाम्रो बोलीबचनले त बिरामीको आधा रोग यसै निको हुनुपर्ने हो । कतै हाम्रा बोली र व्यवहारले बिरामी र तिनका आफन्तलाई थप पीडामा त पारेको छैन ? सेवा हाम्रो धर्म हो । हाम्रो पेसा त यति सुन्दर छ कि हामी आफ्ना दुःख लुकाएर अरुको दुःख मेट्न खटिन्छौं । यसमा अलिकता मिठो बोली थप्न सक्दा सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
अनि अर्को सुधार गर्नुपर्ने कुरा, हामी आँखाअगाडि भएको गलत कुराका बारेमा पनि खुलेर बोल्न सक्दैनौं । सहकर्मीलाई अन्याय भइराखेको छ भने स्वार्थी बनिदिन्छौं । यसो गर्दा अन्याय गर्ने हाकिमको मनोवृत्ति नर्सलाई जे गरे पनि हुँदोरहेछ भन्ने हुन्छ । मन पर्नेलाइ काखा अनि नपर्नेलाई पाखा गर्ने हाकिम नर्सका व्यवहार खै त अन्त्य भएको ?
बिरामी र कुरुवाका अगाडि आफ्नै क्षेत्रका सिनियरले जुनियरलाई गाली गर्दैमा वार्ड व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? सुधार सबैमा जरुरी छ । आफ्नाले नै माया नगरे अरुले गर्लान् भनी सोच्नु मुर्खता हो । बिरामीका अगाडि गाली गर्दा काम गर्ने मनोबल नै घट्छ । सुधार सबै तह र पक्षबाट हुनु जरुरी छ । अनि बल्ल हामीले सोचेको जस्तो हुन्छ नर्सिङ पेसा नेपालमा । कोसिस गर्ने हातहरू कहिल्यै असफल हुँदैनन् । त्यसैले आफूमा सुधार ल्याऔं र सबै मिलेर यो पेसालाइ अझ उत्कृष्ट बनाउनतर्फ लागौं ।